Harowo.com | HarawoNews – Somalia Information & Analysis – Faallo: Cali Nus, oo Ku Haftay, si uu Uga Baxana Garanla Faduushii U Geysay Kiiska Iyo Shirqoolka Raga Hargeysa ku Xidhan!
Faallo: Cali Nus, oo Ku Haftay, si uu Uga Baxana Garanla Faduushii U Geysay Kiiska Iyo Shirqoolka Raga Hargeysa ku Xidhan!
Apr 21, 2012 SOMALI NEWS Comments Off on Faallo: Cali Nus, oo Ku Haftay, si uu Uga Baxana Garanla Faduushii U Geysay Kiiska Iyo Shirqoolka Raga Hargeysa ku Xidhan!
Caysaantii Mas iyo Good, Madax Shabeel Leeftaa, Malageedii Baa Galayeey
Wasiir kuxigeenka wasaarada waxbarashada Somaliland, Cali Xaamud Jibriil, oo ku magac Dheer Cali Nus, ayaa dhex dabaalana, sii uu uga baxana garanla mowjado qabiil iyo kuwo siyaasdeed oo hadba soo butaacay, kuwaas oo ay iskaga soo horjeedaan, kuna hirdamayaan xoogag ka awood weyn Cali Nus, iyada oo aanay weli kala cadayn cida ku gacan sarayn doonta kiiska 3-da nin ee xukuumada Siilaanyo u xidhay eedaymo la xidhiidh musuqmaasaqa raashin deeq bixiyayaasha caalamku siiyeen Somaliland.
Cali Nus, oo hada aduunyo ku ciirtay, amaanka naftiisuna halis ku jirto, ayaa sida la sheegay ka shalaynaya faduushii u geysay hawlo ka baxsan shaqada wasaarada waxbarashada, kana sareeya waayo aragnimadiisa nololeed, iyada oo qaar ka mid ah qaaraba Cali leeyihiin wuxuu la mid yahay “caysaantii madaxa shabeelka leeftay.”
Cali Nus, oo sida laga warqabo “aan weligii Ri gees ka ridin”, ayaa damaaciisa waalani u geeyay inuu ka dhex qadhaabto xoogaga isku haya magaalada Hargeysa, oo ah xarunta dhaqaalaha, dhaqanka iyo siyaasadaha beelaha dhexe. Siilaanyo iyo kooxda ku gabraarata ee qabsatay talada Somaliland, ayaa in mudo ahba la tacaalaysay sidii ay u loodin lahaayeen Baarqabka reer Hargeysa ee u haystay inay iyagu xukunka saareen Siilaanyo, laakiinse uu ka abaal daray.
Ugu Horeyn sida ay noo sheegeen ilo wareedyo xog ogaal ah oo ka faaliya arrimaha siyaasada, Cali Nus ayaa la socday bilayskii loo xilsaaray hawl galadii raga lagu soo qaqabanayay, inkasta oo aan la xaqiijin inuu talada Cali wax ku lahaa iyo inkale. Sidoo kale ayaan ilaa hada la ogayn sobabta Cali Nus uu u dhex cararayay Hawl galada bilayska Hargeysa iyo waxa isaga uga shan iyo toban ahaa!
Sidoo kale, Saylici, oo isaguna shir jaraa’id ka akhriyay warqad ay ku qornayd waxyaabaha xukuumada Siilaanyo u cuskatay xadhiga 3-da masuul, ayaan isagana la ogayn meesha uu ka soo galay iyo waxa u geeyay arrimaha nimankan loo haysto. Badiba amarada iyo waraaqaha ka soo baxay madaxtooyada Somaliland waxa akhriya af-hayeenka madaxweynaha Cabdilaahi Cukuse, laakiinse tan Saylici ayaa qoorta loo geliyay.
Cabdiraxmaan Saylici, oo marar badan ay CID-da Hargeysa ee kiiska baadhaysa wax ka waydiiyeen waxa uu ka ogyahay kiiska nimanka xidhan, ayaa ku celciyay inuu Cali Nus hoosta ka soo geliyay arrimhan, sidaa darteedna aanu shakhsi ahaan waxba ka ogayn. Waxaanu sida la sheegay halhays ka dhigtay in wixii Cali Nus u sheegay wax ka badan aanu ogayn, taas oo Cali Nus dhibaato badan u keentay, kana dhigtay nin udub dhexaad u ah shirqoolka nimanka lagu soo xidhay.
Xukuumada Siilaanyo oo Cadaadis badani kaga yimid qaraabadii iyo beelihii ay raga xidhani ka soo jeedeen iyo waliba hay’adaha caalamka ee u dagaalama xuquuqal iinsaanka, ayaa sida ka muuqata kiiskan iskaga riixday Cali Nus iyo Saylici, isla markaana go’aansatay inay safka hore ka galaan sidii loogu cadayn lahaa dambiyada loo haysto.
Saansaanta ka muuqata Saylici iyo Cali Nus, ayaa loo qaadan karaa in ayna labada nin meel ka soo wada jeedin, waxaana lagu tilmaami karaa inuu nin walba meeshii ka dirir yahay, kuna tashaday sidii uu tiisa u badbaadin lahaa!
Wararkan ayaa waxa kale oo ay intaa ku dareen inay xukuumada rabto inuu Cali Nus noqdo qofka ugu muhiimsan ee markhaatiga ku fura, si aan laalaabad lahayna ugu cadeeya qodobada loo hasyto raga xidhan maalinta maxakamad la keeno. Habada Cali oo bilowgii xiiso badan u hayay shirqoolka loo meelagay raga xidhan, ayaa sida la sheegay hada ay la fool xumaatay waxyaabaha xukuumada Siilaanyo ka doonayso, kuna hagaagi la’ inuu toos u diido amarka xukuumada, taas oo Cali ka dhigaty nin labo dhagax dhexdooda yaala.
Sida ay noo xaqiijiyeen ilo wareeyadan aanu ka helnay xogaha dhibaatooyinka Cali Nus la soo darsay, waxay noo sheegeen in mudo haatan laga joogo dhawr wiik inay CID-a Hargeysa 3 casho Cali Nus baacsanayeen suuqyada magaalada Hargeysa, isaga oo hadba guri ku dhuumanayay, waxaana la sheegay inuu ugu dambaytii galay guriga Saylici, halkaas oo uu mudo kaga gabaday sirdoonkii iyo askartii ku dabo jiray.
Maalmo ka dib, ayaa waxa Cali Nus gacanta ku dhigay madaxa CID-da Somaliland, Daahir Muuse – Qonbor (Samaroon, Jibraacin), oo hogaaminayay askartii Cali suuqyada Hargeysa ka Baacsanaysay, waxaana la geeyay xarunta dambi baadhista, halkaas oo Cali lagaga qaaday Inkayd dheer oo qoraal ah, oo ku saabsan macluumaadka uu ka ogyahay kiiska iyo arrimaha nimanka xidhan loo haysto, ka dibna Cali waa la sii daayay.
Markii Cali la sii daayay, ayaa waxay ogaadeen qaraabadii raga xidhani doorka uu Cali Nus ka qaatay xadhigooda iyo sida ay xukuumadu u doonayso inay u adeegsato Cali Nus, si loogu cadeeyo dambiyada loo haysto, waxaanay ku hanjabeen qaraabadii raga xidhani inay Cali ka Takhalusaan. Cali ayaa hal mar aduunyo ku ciirtay, waxaanu sida la sheegay ka waayay magaalada Hargeysa meel qarisa.
Cali ayaa markii uu ogaaday inuu yahay nin calaamadaysan wuxuu galay marxaladii ugu adkayd ee nolashiisa soo marta, waxaanu bilaabay inuu habeenba meel u hooydo, isaga oo ay nolashiisii suququl gashay. Cali, ayaa sida la sheegay iska tuuray baabuurkii cadaa (Land Cruisar) ee uu ka dhaxlay agaasimihii hore ee waaxda xisaabaha ee wasaarada waxbarashada Ibraahim Aamin, wuxuuna magaalada ku dhex maraa gadhi yar oo civilian ah, iasga oo mararka qaarna qaata tagsi.
Kiiska ninmanka xidhan oo maalmahan ay shiiqiyeen shirkii xisbiga Kulmiye iyo fadeexadihii ka dhashay markii xisbiga laga saaray Cabdiraxmaan Cabdulqaadir iyo kala reebista ururada siyaasada, ayaa hada dib u soo karaar qaatay, lana filayaa inuu dhakhso u dhamaado. Cali Nus, ayaa maalinba maalinta ka dambaysa surginka qoortiisa sudhani cidhiidhi sii noqonaysa, isaga oo aan haysan cid u miciinta.
Ugu Dambayn Cali Nus, oo Saylicina dayriyay si uu tiisa u badbaadiyo, ayay hada la xumaatay xariiftankii siyaasadda ee uu doonayay inuu af-libaax wax dhex raadiyo, waxaan danihiisa ahayna dhex galo. Cali, ayaa hada khaati jooga oo sida la sheegay ku ducaysanya Ilaahayoow mar uun tan iga khaariji.
Harowo Deska, Harheysa
Wasiirka arrimaha dibadda Somaliland waxa uu ka dhawaajiyey war ay Shacabka reer Somaliland ku farxaan. Tacsi Ku Socota Qyska Marxuum Xasan Maafuul Giire